"Shan jeer ayaa weerar is qarxin ah lagu qaaday ganacsigeyga, mana quusanin" - BBC News Somali
Hoteelkan ayaa 5 jeer lagu qaaday weerarro isqarxin ah
Afar maalmood ka dib weerarkii isqarxinta ahaa ee lala beegsaday Hoteelka Maka Al-Mukarama, waxaa hadda socda ol'ole dayac tir loogu sameynayo Hoteelkaas oo burbur aad u xooggan uu gaaray.
Maamulka hoteelka Maka Al-Mukurama ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hanti lagu qiyaasay boqollaal kun oo doolar ay uga luntay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelkaasi, habeenkii khamiista ee jimcuhu uu soo galayay.
Khasaaraha weerarkii Muqdisho oo sii kordhay
Kenya oo garab istaagtay Soomaaliya, ka dib weerarkii Muqdisho
Weerarkan oo ahaa kii shanaad ee lala beegsado hoteelkan ayaa sidoo kale galaaftay nolosha 2 ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha Hoteelka, kuwaasoo mid uu waardiye ahaa midka kalena uu Makhaayadda ka adeegi jiray.
Guryihii u dhawaa hoteelka ayuu sidoo kale weerarku saameeyay
Hase ahaatee, milkiilaha Hoteelka Maka Al-Mukarama Gurey Xaaji Xasan ayaa sheegay in wali uusan quusanin, inkastoo weerarkan uu yahay kii 5-aad ee lagu bartilmaameedsaday.
"Mar walba khasaaruhu wuu kala xoog badnaa, waxaa ugu darnaa labadii weerar ee ugu dambeeyay oo ah kan iyo kii ka horreeyay. Weerarkan kii ka horreeyay qudhiisa dad badan ayaa ku dhintay xoolo bandanna way ku khasaareen, laakiin mar walba waxaan aaminsanaa inaanan is dhiibin oo uu waddanku sii fiicnaanayo, haddana wali waan aaminsanahay mana quusanin".
Ilaa $300,000 oo doolar ayuu ku qiyaasay khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay weerarkan, halka weerarkii ka horreeyayna ay ku burburtay in ka badan $200,000 oo doolar.
Burburkii ka dhashay qaraxa ayaa laga saarayaa hoteelka si dayactir loogu billaabo
Mar uu ka hadlayay waxa uu u maleynayo sababta Hoteelkiisa loola beegsanayo weerarrada soo noqnoqday ayuu yidhi: "Sababta aan bartilmaameedka u ahay waa 'Maxaad u tahay waddani?, maxaad canshuur u bixisaa?, maxaad u tahay nin dowladnimada jecel?', wax kale oo la igu maagayo ma aqaanno aniga. Nin Soomaali ah ayaan ahay, oo Allihiisa caabuda, qofna dambi kama galin, hoteelkeyga waxaa la yiraahdaa Maka Al-Mukarama, waa hoteel asturan, laakiin waxaa la iugu heystaa maxaad u nooshahay oo aad xiriir ula leedahay dadka madaxda ah, waayo waxaan waa ganacsi, hoteelkeyguna waa mid heer sare ah waxaana lacagtiisa iska bixin kara dadka madaxda ah iyo kuwa dibadaha ka yimid. Marka waxaa la igula dirirsan yahay maxaad dadkaas u soo dhaweysaa, sabab kale anigu ma ogi".
Milkiilaha Hoteel Maka Al-Mukarama ayaa sheegay in waligiis aysan wax xiriir ah lasoo sameynin kooxaha weerarrada ku soo qaada.
Kharaase isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkan
Dhanka kale dowladda Soomaaliya, oo sida uu sheegay lagu heysto iney marti galiyaan, ayuu sheegay in waligood aysan la qeybsanin Khasaaraha ka dhasha weerarrada loo geysto hoteelkiisa.
"Magdhow ima siiyaan, canshuur unbay iga qaadaan sababtoo ah cilaaqaad noocaas ah nagamaba dhaxeeyaan, ganacsi unbaa naga dhaxeeya".
Hoteelka Maka Al-Mukarama, oo ka mid ah meheradaha ganacsi ee ugu qiimaha sarreeya magaalada Muqdisho ayaa la aasaasay markii magaalo Madaxda Soomaaliya laga dareemay in xaaladdeeda amni ay soo hagaageyso, waxaana uu ku yaallaa waddada halbowlaha u ah isu socodka magaalada ee Maka Al-Mukarama.